SAWIRRO:- Ciidamada Danab Oo Bur-Buriyay Saldhig Kooxda Al-Shabaab Ku Laheyd Gobalka Sh/hoose.
Saturday January 13, 2018 - 16:05:40 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Ciidamo katirsan Kumaandooska Soomaaliya ee Danab ayaa howlgal qorsheesan ka fuliyay Deegaanka Leego ee gobolka Shabeelaha Hoose, waxaana ciidankan la sheegay in ay bur buriyeen saldhig Al Shabaab ku lahaayeen deegaankaasi.
Saraakiil katirsan Kumaandooska Soomaaliya oo la hadlay Warbaahinta Afka Dowlada ku hadasha ayaa sheegay in ay bur buriyeen saldhig Al Shabaab weeraro kasoo abaabuli jireen oo kuyaala deegaanka Leego.
Waxa ay sheegeen Saraakiisha Kumaandooska Soomaaliya in ay ku dileen 10-dagaalyahan oo katirsan Al Shabaab howlgalka ay ka fuliyeen Deegaanka Leego sidoo kale kusoo qabsadeen hub iyo saanad ciidan.
Taliyaha Ciidanka Kumaadooska Soomaaliya ayaa sheegay in ay ciidankooda kordhiyeen howlgalada ka dhanka ah Al Shabaab, waxa uuna shacabka ugu baaqay in ay gacan ka siiyaan ciidanka Kumaandooska.
Ciidanka Kumaandooska Soomaaliya ayaa marar badan howlgalo qorsheesan oo ka dhan ah Al Shabaab ka fuliyay gobolka Shabeelaha Hoose iyaga oo gacan ka helaya ciidamo Mareykanka ah oo ku sugan saldhiga Bali Doogle.